Google Analytics Gudbinta Gudbinta iyo ndash; Dhamaan iyo Dhibaatada Khadka Dhexe
Google Analytics Gudbinta Gudbinta iyo - Dhamaan iyo Dhibaatada Khadka Dhexe
Ma aha khalad in la yiraahdo Google Analytics waa mid ka mid ah qalabka ugu xoogan ee ugu haboon si loo dabagalo dhammaan noocyada taraafikada. Waxay hubinaysaa in dadka booqanaya ee goobtaada ay yihiin dad dhab ah, oo aan ahayn bots iyo botnets kuwaasoo laga yaabo in ay waxyeeleeyaan boggaaga dhowr maalmood gudahood. Waxaad ka abuuri kartaa gaadiidka adoo adeegsanaya bogagga internetka ee warbaahinta bulshada, xayeesiinta, suuq-geynta emailka ama gaadiidka tooska ah ee mashiinka raadinta - gestion de projet web logiciel comp. Tani waxay tahay, inaad ku qorto sheekada indhaha iyo wargelinta oo aad galiso boggaaga warbaahinta bulshada si aad u soo jiidato dad badan.
Inkastoo aasaaska Google Analytics ay fududahay in la fahmo, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid sida loo rakibo goobaha ku salaysan nooca ganacsigaaga. Google ayaa dadka isticmaala ku siinaya talooyin badan, tabaha, iyo macluumaadka, taasina waa wax fiican in laga barto barashooyinka internetka. Dhab ahaantii, dhammaanteen waxaan wada-jiri karnaa oo dib-u-hagaajinaynaa waddooyinka iyo nidaamkooda.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , ayaa halkan ka hadlayaa sida ka-joojinta u-dirista, noocyada aaladaha loo baahan yahay in laga saaro iyo sida loo-qorsheeyo liisaska ka-reebitaanka ee loo diray
Sidee u shaqeeyaa Google Analytics Reflection Reflex
Ka warhaynta Google Analytics waxay u shaqeysaa sida Google uu ku sharaxay. Waxay ka reebaysaa taraafikada laga diiwaan geliyey dhowr qaybood oo ku jira warbixintaada gudbinta..Taasi waxay ka dhigan tahay in aadan abuuri karin taraafikada ilahaas. Hawlgalku wuxuu shaqeeyaa marka aad hagaajinayso goobahaaga gudbinta ikhtiyaariga ah iyo xannibaadyada domainska laga yaabo inaadan rabin inaad aragtid. Marka laga reebo xiriiradaas ka soo gudbintaada waxay hubin doontaa in goobtaadu ay hesho gaadiid tayo leh oo ilahooda ay yihiin sharci ahaan. Waxa kale oo muhiim ah in la go'aamiyo inta kulan ee aad u baahan tahay. Waxay micnaheedu tahay haddii aad ka saareyso taraafikada meelaha qaarkood, ka dibna dadka martida ah ee ka dhaxeeya xiriiradaasi ma awoodaan inay furaan boggagaaga. Tusaale ahaan, haddii URL-kaaga boggaagu yahay abc.com, markaa waxaad ku dari kartaa liistada Google Analytics Tixraaca Diiwaangelinta Diidmada. Soo-booqdayaasha warbaahinta bulshada gaar ahaan Facebook iyo Twitter waxay soo gali doonaan website-kaaga, laakiin booqashooyinkooda lama xisaabin doono AdSense-gaaga Shaqo-siinta
Maxay tahay meesha laga saaro
Waa inaad ka fogaataa dhamaanba goobaha aan xaqiiqada ahayn ama u xun. Waxaa jira laba kiis oo markaad rabto in aaladaha qaarkood ay ka baxaan. Ugu horreyntii, waa inaad hubisaa oo joojisaa dhammaan meelaha aan la aqoon, soddon-qaybood iyo xiriirkooda xiriirka ah. Haddii dad ka socdo xiriirka sadexaad ee qaybta ah ay soo booqdaan website-kaaga, ma awoodaan inay abuuraan wax dhibaato ah. Tani waxay khuseysaa dhamaan bogagga saddexaad ee internetka iyo magacyada domainka. Waa inaad xaqiijisaa sharciyadooda iyo xaqiiqdooda haddii aysan jirin wax khatar ah. Waa inaad sidoo kale xakameysaa xayndaabyada leh xiriiro badan. Haddii ay dhacdo, website-kaagu wuxuu xiriir la leeyahay meelo badan oo ka mid ah boggaga martida martida, waa in aad dhexdhexaadisaa inta u dhaxaysa iyaga oo hubi goobaha ay wanaagsan tahay in la raaco. Dhammaan domains kuwaas oo u eg in aan la oggalaan waa in la xakameeyo si nabadgelyo leh internetka.
Qalabixinta Google Analytics Tixraacinta Diidmada
Waa in aad isku habeysid kala wareejinta Google Analytics adoo ku daraya magacyada domain cusub liiskaaga ka-saaris liiskaaga. Tani, waa inaad sameysid liis ah dhamaanba goobahaas oo aad ka xoqdo xidhiidhkooda qaybta maamulka Google Analytics.